Circuit Breaker, Indoor Mwenje Kukodzera, Smart Watt Meter - Hawai
S7DC Mini Dunhu mudariki
· DC 1000V 63Amp · Iyo inokodzera Dziviriro kune DC wedunhu kuwandisa uye pfupi dunhu · inoenderana neIEC898 uye GB10963 Standard
Vedu vese QC tsvimbo vane basa rekuita
Yakaomesesa yemhando yekuongorora pasi pe ISO 9001: 2000
Wholesale 10KA 6KA iec vaipupurirwa mcb Mini Circu ...
Wholesale C7S akatevedzana AC contactor 9-95A conta ...
Wholesale YKMF akatevedzana 20a 24A 40A 63A Modular C ...
Wholesale 0 ~ 999999. 9kwh 1.5 (6) A 5 (20) A 10 (40) ...
Wholesale 500V 690V 125A Cylindrical Fuse Vabati
YUANKY KUBVIRA 1989
Wenzhou Hawai Electron & Electric kugadzira Co., Ltd. inozivikanwawo seYUANKY yakatangwa muna 1989 YUANKY ine vashandi vanopfuura 1000, inovhara nzvimbo inopfuura 65000 mativi emamirimita. Tine yedu yekugadzira yazvino mitsara uye yakakwira kudzora michina nesainzi manejimendi, nyanzvi mainjiniya, epamusoro akadzidziswa mahunyanzvi uye vane hunyanzvi vashandi. YUANKY inosanganisa R & D, kugadzirwa, kutengesa, uye sevhisi kugadzira yakazara yemagetsi nemagetsi mhinduro ..
Eaton's smart power defense circuit breaker inowedzera kushanda kune vatengi veC & I
Mbudzi / 09/2020
Eaton's smart circuit breaker (inozivikanwawo seyesimba manejimendi redunhu breaker) yevashandisi vekugara yakaratidzwa zvakanyanya pagore rino International Solar Energy Show. Sonnen akaratidzira Eaton smart smart breaker kuburikidza nekuisa zvine simba. Chigadzirwa chakaratidza kugona kweec ...
Iyi mhepo iri pasi pe radar ichawedzera UPS yekuverenga
Mbudzi / 07/2020
Iyo Motley Benzi yakavambwa mu1993 nehama Tom naDavid Gardner. Kuburikidza newebhusaiti yedu, podcast, mabhuku, mapepanhau, zvirongwa zveredhiyo uye epamberi mabasa ekudyara, isu tinobatsira mamirioni avanhu kuwana rusununguko rwemari. United Parcel Service (NYSE: UPS) yakanga iine imwe kota yakasarudzika, ...
Gunyana / 28/2020
Parizvino, iko kwehunyanzvi kushandiswa kwe lithiamu bhatiri mune simba rekuchengetera rinotarisa zvakanyanya kuminda ye grid base chiteshi chekumira magetsi, imba yekuchengetera system, mota dzemagetsi uye zviteshi zvekuchaja, maturusi emagetsi, zvishandiso zvemuhofisi epamba uye mimwe minda. Munguva yegumi nematanhatu Hongu ...
mubatanidzwa utsva uye dhijitari tekinoroji simba
Parizvino, shanduko yedhijitari yave chibvumirano chemabhizinesi, asi takatarisana neiyo tekinoroji yedhijitari isingaperi, maitiro ekuita iyo tekinoroji kutamba mukana wakakura kwazvo munzvimbo yebhizimusi rebhizimusi chirahwe uye dambudziko rakatarisana nemamwe mabhizinesi. Panyaya iyi, panguva ye ...
Nhau dzeCCTV dzakanyora murwi wekuchaja seimwe yenzvimbo nomwe huru dzekuvaka zvivakwa.
Abstract: muna Kukadzi 28, 2020, chinyorwa "inguva yekutanga danho idzva rekuvaka kwezvivakwa" rakaburitswa, izvo zvakakonzera kutarisisa kukuru uye Kukurukurirana nezve "zvivakwa zvitsva" mumusika. Shure kwaizvozvo, nhau dzeCCTV dzakanyora murwi wekuchaja senge pa ...